XOG: XIldhibaan ka hor-yimid Amar culus oo ay DF Soomaaliya ku soo rogtay shaqaalaheeda (Ogow Sababta)! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: XIldhibaan ka hor-yimid Amar culus oo ay DF Soomaaliya ku soo...
XOG: XIldhibaan ka hor-yimid Amar culus oo ay DF Soomaaliya ku soo rogtay shaqaalaheeda (Ogow Sababta)!
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa /Sawir hore/Keydka HQ
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa uu ka horyimid awaamiir ay dowladdu ku soo rogtay shaqaalaheeda.
Wixii ka dambeeyay qaraxii 24-kii bishii July ka dhacay Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar oo la sheegay inay ka dambeysay gabar ku magacawneyd Agaasimaha ururka naafada Gobolka Banaadir ayaa waxay horseeday in dareen laga muujiyo shaqaalaha dowladda, waxayna dowladdu bilowday in dhammaan shaqaalaheeda ay ku amarto in qof kasta uu keeno Xildhibaanka ku metelaya Golaha Shacabka amaba Golaha Aqalka Sare, si looga qoro dammaanad ah inaanay wax dhibaato ah ka imaan doonin.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa waxaa uu tani ku macneeyay mid culeys lagu saarayo Xildhibaanada Baarlamaanka, isagoo dhanka kale sheegay in markii dowladdu qaadaneysay shaqaalaha aanay waxba ka ogayn Xildhibaanada.
“Arrintaas damaanada ah waxaan u aragnaa mid lagu xujeynayo Xildhibaanada, dowladdu markii ay qoraneysay shaqaalaha anagu uma aanan gayn, iyadaa qoratay, dadka qaarna waxaaba laga yaabaa inaysan lahayn Xildhibaan ku metela Baarlamaanka. Marka qofka aanan anigu shaqada gayn, ma garanayo waxaa la ii dhahaayo damiino, waxaan u arkaa culeys siyaasadeed oo Baarlamaanka la saarayo.” Ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo la hadlay Warbaahinta.
Prof. Dalxa ayaa waxaa uu Dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay joojiso awaamiirtan, haddii kalena ay qaab kale u maareyso, waxaa uu intaa ku daray inay arrintan u maarayn karto si kale, iyadoo aan culeys lagu saarayn Xildhibaanada.
“Dowladdu hanaga deyso go’aanka ah in Xildhibaan ku damiinto qof uusan garanayn waxa ka imaan kara, haddii aysan doonayn in meeshaas ceeb ka timaado, si kale ayay u maarayn kartaa. Nidaamka ay u martay qorista ciidamada ayay u mari kartaa oo diiwaan-gelin casri ah ayay ku samayn kartaa, yeysan nagu dhibin anaga.” Ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Si kastaba ha’ahaatee, hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa waxay Magaalada Muqdisho ka wadaa su’aalo ay mid mid ugu weydiineyso shaqaalaha ka hawlgala Wasaaradaha Xukuumadda, iyadoo Wasaarad walba ay shaqaalaheeda mar u yeerto.
Hay'ada Nabad sugidda
shaqaalaha inay damiin xildhibaan ah keenaan